पोखरामा नेपालकै उत्कृष्ट शिक्षा दिइरहेका छौं : आचार्य | NepalDut
पोखरामा नेपालकै उत्कृष्ट शिक्षा दिइरहेका छौं : आचार्य
नोभेल एकेडेमीले सञ्चालन गरेका शैक्षिक कार्यक्रम के–के छन् ?
नोभेल एकेडेमीलाई गण्डकी प्रदेशकै उत्कृष्ट शैक्षिक गन्तव्य बनाउन पाउँदा हामी निकै हर्षित छौं । पछिल्लो समय विद्यार्थीको बढी रुचि भएका र बजारमा माग भएका विषयहरूको अध्यापनमा हामीले जोड दिएका छौं । सोही अनुसार विद्यार्थीको आकर्षण पनि निकै उत्साहजनक छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा प्रत्येक वर्ष स्नातकतर्फ बिएस्सी नर्सिङ, बिफार्मेसी, बिबिएको पढाइ भइरहेको छ । स्नातकोत्तरतर्फ एमबिएको पढाइ हुन्छ ।
पोखरामात्र नभएर छिमेकी जिल्लाका विद्यार्थीसमेतको कलेजप्रति आकर्षिण छन् । यी कोर्षमा ४ वर्षे बिएस्सी नर्सिङको पढाइपश्चात् स्वदेशमै अवसर मिल्नुका साथै युरोप, अमेरिका तथा बेलायत जान चाहनेका लागि पनि निकै फलदायी छ । सन् २०२० सम्ममा अमेरिकामा १२ लाख नर्सको माग रहेको परिप्रेक्षयमा यहाँ पढेकालाई सहज हुनेछ । नेपालकै प्रतिष्ठित मेडिकल कलेज तथा अस्पतालमा आधारभूत तथा विषयगत प्रयोगात्मक अभ्यास गर्ने भएकाले पनि विद्यार्थीले सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यवहारमा उतारी दक्ष बन्ने अवसर पाएका छन् । त्यस्तै चिकित्सा क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण पढाई बिफार्मेसीमा पनि यसको स्कोपको हिसाबले वर्षेनी विद्यार्थीको आकर्षण बढ््््दो छ ।
कलेजका विशेषता केके छन् ?
पूर्ण प्राविधिक शिक्षा हामी प्रदान गर्छौं । समय समयमा सम्बन्धित विषयका विज्ञलाई ल्याएर कक्षा लिने गरेका छौं । यहाँबाट उत्पादित विद्यार्थी कहिल्यै पनि बेरोजगार बस्नु परेको छैन । कतिपयले उद्यममा लागेर राम्रो गरेको उदाहरण पनि छन् । विद्यार्थीहरू व्यवहारिक अभ्यासका लागि प्रख्यात उद्योग, बैंक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा जान्छन् र त्यसैमा कुशलतापूर्वक काम गरी रोजगारसमेत पाइरहेका छन् ।
सफलताको पछाडिको कारण भनेको २१ औं शताब्दीको मागअनुरुप शिक्षण विधिलाई समयानुकूल परिवर्तन गरिनु हो । कलेजको धेरै व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा बैंकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेका कारण पनि योग्य विद्यार्थीले रोजगारी पाएका हुन् । लामो समय अनुभव भएका प्राध्यापकबाट अध्यापनको व्यवस्था गर्न सफल छौं ।
विद्यार्थी भर्नाको अवस्था कस्तो छ ?
बिएससी नर्सिङ, बि फार्मेसी, बिबिए र एमबिएका लागि अहिले हामीले भर्ना आवेदन खुला गरेका छौं । फर्म खुला भएदेखि नै विद्यार्थीको आकर्षण निकै देखिएको छ । विगतका वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि विद्यार्थीको आकर्षण देखिएको हो । बिएससी नर्सिङ र बि फार्मेसीको फर्म भर्ने अन्तिम मिति भदौ १ गते हो । बिबिएको इन्ट्रास भदौ २८ गते हुँदै छ । साथै एमबिएका लागि यही साउन २८ गते प्रवेश परीक्षा हुँदै छ । सबै विषयमा विद्यार्थीले भर्ना हुनका लागि फर्म लगिरहनुभएको छ । आधुनिक तथा पूर्ण प्राविधिक शिक्षा भएकाले पनि कलेजप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढेको हो । हामीले छात्रवृत्तिको समेत व्यवस्था गरेका छौं । जेहेन्दार र आरक्षणलाई छात्रबृित्तको कोटा छुट्याएका छौं । जेहेन्दारलाई ८० प्रतिशत छुट र आरक्षणलाई शतप्रतिशत छुटमा पढाउँछौं ।
यहाँबाट उत्पादित विद्यार्थी कहिल्यै पनि बेरोजगार बस्नु परेको छैन । कतिपयले उद्यममा लागेर राम्रो गरेको उदाहरण पनि छन् ।
बजारको माग अनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ ?
बजारमा माग भए अनुसारको शिक्षा हामी प्रदान गर्न सफल छौं । सन् २००९ बाट बिएसी नर्सिङ, बिफार्मेसी, बिबिए र एमबिएको पढाइ सञ्चालन सुरु ग¥यौं । जसले गर्दा ए लेभल गरिसकेका र अन्य विद्यार्थीले आफ्नो चाहना अनुसारको प्रतिस्पर्धी उच्च शिक्षा पोखरामै लिन सफल भए । सबै तहको अध्ययनमा सुरुदेखि नै विद्यार्थीको आकर्षण राम्रो छ । सिट खाली हुँदासम्म पोखरामै अध्ययन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने विद्यार्थीको चाहना हुन्छ । बजारमा माग उच्च भएकाले बेरोजगार कोेही पनि बस्नु पर्दैन । सबै तहमा गरेर यहाँबाट ३ हजार ५ सय विद्यार्थी दक्ष बनेर उत्पादन भइसकेका छन् । उत्पादित विद्यार्थी कोही पनि बेरोजगार बस्नुपरेको छैन । दक्ष जनशक्ति उत्पादन नै हाम्रो प्रण हो ।
भावी योजना के के छन् ?
स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित शिक्षा भएकाले १ सय बेड क्षमताको अस्पताल सञ्चालनको तयारी गरिरहेका छौं । अत्याधुनिक सुविधायुक्त अस्पताल सञ्चालन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मोडलमा अगाडि बढेर नोभेल एकेडेमीलाई प्राइभेट मोडलको युनिभर्र्सिटीको रुपमा विस्तार गर्ने हाम्रो सोच छ । नोभेल एकेडेमीलाई हामीले पोखराको गहनाका रुपमा विकसित गर्दै अगाडि बढ्छौं । संविधानको मस्यौदामा प्राइभेट युनिभर्सिटी खोल्न पाउने लेखेकाले पनि हाम्रो लक्ष्य पूरा गर्न समस्या नहुने देखिन्छ । तर राज्यले अहिलेसम्म प्राइभेट युनिभर्सिटी खोल्नका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नै सकेको छैन ।
अर्को कुरा गण्डकी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनका लागि प्रदेश सरकारको समेत शिक्षा र स्वास्थ्यमा ध्यान जान आवश्यक छ । अब विदेशी पोखरा घुम्नमात्र आउने होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका शिक्षालयमा विदेशी विद्यार्थीलाई समेत आकर्षित गराउन सक्नुपर्छ । यहाँ यति राम्रो हावापानी भएको क्षेत्रमा आधुनिक अस्पताल स्थापना गरी मेडिकल सिटीको रुपमा समेत विकास गर्नुपर्छ, जुुन पोखराबाट सम्भव छ ।
मोफसलमा रहेर राजधानी र विदेशसँग प्रतिस्पर्र्धा गर्न समस्या छैन ?
पोखरा पनि अब मोफसल होइन, किनकि गण्डकी प्रदेशको राजधानी हो । संसारमै प्रसिद्ध पर्यटकीय नगरी हो । मुलुक संघीयतामा गएपछि यस्ता सहरको महत्व अझ बढेको छ । यद्यपि देशको राजधानीको तुलनामा पोखरा मोफसल नै हो । नोभेल एकेडेमी पोखरामा रहेर पनि सधैं उत्कृष्ट रहँदै आएको छ । हालै न्यू बिजनेस एजले गरेको रेटिङ ¥याङ्किङ अवार्डबाट हामी साबिक पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको नम्बर वान बनेका थियौं । हामी नेपालकै उत्कृष्ट ९ भित्र पर्न सफलसमेत भयौं । हामीले सबै प्राविधिक शिक्षामात्र प्रदान गरिहेका छौं । परम्पराभन्दा पृथक रहेर शिक्षक केन्द्रित भन्दा विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षा प्रदान गर्न हामी सफल छौं ।
विद्यार्थीको चाहना अनुसारको गुणस्तरीय शिक्षामा हामीले कहिल्यै पनि कमी हुन दिँदैनौं । कलेजको प्रत्यक्ष अवलोकन गरी वास्तविकता बुझिदिनुहुन म विद्यार्थीलाई आग्रह गर्दछु ।
व्यक्तित्व विकासका लागि तालिम र जब मार्केटका लागि आवश्यक सीपलाई हामी बढी महत्व दिन्छौं । विदेशी विश्वविद्यालयसँग हाम्रो रणनीतिक साझेदारी छ । विद्यार्थी र शिक्षकलाई विदेशी विश्वविद्यालयमा पठाउने र त्यहाँबाट विद्यार्थी र शिक्षक यहाँ ल्याएर अनुभव आदानप्रदानदेखि गोष्ठी तथा सेमिनार पनि आयोजना गर्छौं । युके, अमेरिका, युरोपका विश्वविद्यालयसँग रणनीतिक साझेदार भएकाले पनि हाम्रो पढाईप्रति आम विद्यार्थीको विश्वास छ ।
विद्यार्थी कहाँ कहाँबाट अध्ययनका लागि आउँछन् ?
अधिकांश विद्यार्थी पोखरा क्षेत्रकै छन् । जम्मा विद्यार्थीको ७० प्रतिशत पोखरा क्षेत्रका छन् भने ३० प्रतिशत विद्यार्थी छिमेकी जिल्लासहित देशका विभिन्न स्थानबाट आएका छन् । पोखरा बाहिरका विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा पनि उपलब्ध छ ।
नोभेल एकेडेमी सन् २००२ डिसेम्बरबाट पोखरामा सञ्चालनमा आएको हो । काठमाडौं बाहिर पहिलो पटक ए लेभलको पढाइ पोखरामा हामीले सञ्चालन गरेका हौं । शिक्षा क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ पोखरामा नोभेल एकेडेमीको स्थापना भएको हो । शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनका लागि पोखरा उर्वरभूमि नै मानिन्छ । यहाँका विद्यार्थी ए लेभल पढ्नका लागि काठमाडौं वा विदेश जानुपर्ने बाध्यता थियो, जुन हामी हटाउन सफल भयौैं । विद्यार्थीको माग अनुसार अन्य स्नातकतर्फ बिएस्सी नर्सिङ, बिफार्मेसी, बिबिएमा ४० सँगै स्नातकोत्तरतर्फ एमबिएको कक्षा सुरु गर्न सफल भयौं । अहिलेसम्म विद्यार्थीको माया पाउन हामी सफल छौं । विद्यार्थीको चाहना अनुसारको गुणस्तरीय शिक्षामा हामीले कहिल्यै पनि कमी हुन दिँदैनौं । कलेजको प्रत्यक्ष अवलोकन गरी वास्तविकता बुझिदिनुहुन म विद्यार्थीलाई आग्रह गर्दछु ।
कोरोना कहरमा बच्चाको योजना गर्ने कि नगर्ने ?
रत्ननगरका मेयरलाई कोरोना संक्रमण
अधिकारीलाई विश्व–राधा–नेत्रा साहित्य पुरस्कार
क्षमताभन्दा चौबर कैदी, एकै दिनमा २५९ लाई संक्रमण
युआरएलमा असोजभरि सबै जाँचमा ४० % छुट
पूर्व माओवादी मुख्यालयमा पहिलो पटक नेकपा सचिवालय बैठक
वरिष्ठ अधिवक्ताले १ वकिल सहयोगी अनिवार्य राख्नुपर्ने
दशैंमा लोकल खसी, कुखुरा र हाँस होम डेलिभरी, बुकिङ सुरु
कविता : भूकम्प
कोरोना देखिएका कोइराला अस्पताल भर्ना